5 Atụmatụ na-aga nke ọma Tọghata gị Online Prospect n'ime a ahịa | Martech Zone
Anyị na-akọrọ banyere otú ịrịba na Ume ngwa bụ ụnyaahụ. Achọpụtara m banyere ha mgbe m natara ozi infographic a iji kesara ha, Otu esi emechi ndu ndi ahia. Njem nke ha kọwara na email na-amalite mgbe na na-ebute ndu site na ahia.
Ihe 5 iji mechie ndu
Jiri CRM - N'ezie, ị ga-enwe ebe na- dekọọ ndu, jide ozi ndị ọzọ gbasara ha, butere ha ụzọ, ma rụọ ọrụ ruo na njedebe. Njikwa mmekọrịta ndị ahịa Ezubere usoro maka inweta, njigide na ọrụ nnabata site na ịnakọta data na ebe nchekwa dị n'etiti ndị ahịa. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-enwe obi ụtọ, ha na-eji ya usoro nhazi usoro ire ere n'ahịrị ya. Ahịa bụ ndị ahịa.
Nwee ya ma mara ya - Oge mmeghachi omume na imirikiti ndị ndu abịaruteworị gị mgbe ị nyochachara ngwaahịa na ọrụ gị n'ịntanetị. Nke ahụ pụtara na ndị ahịa gị ga-adị njikere ịza ngwa ngwa na nke ọma na ajụjụ ndị nwere olile anya - ọzọ ị nwere ike tufuo ọrịre ahụ.
Chọta Otu Ala - Nyochaa olile anya gị iji nyere gị aka ịhazi usoro ahịa. Na Ume ngwa E wuru kpọmkwem maka nke a! Nakwa, ọ bụrụ na ịnwee nnukwu azịza akpaaka ahịa nke na-agbakọ ma na-anakọta ozi gbasara omume gị - ị nwere ike inye ndị ahịa gị ọgụgụ isi ha chọrọ iji hazie ma mechie ụzọ ahụ dị mfe.
Zute ihu na ihu - Ọ bụ ezie na nnukwu nkwekọrịta na-achọkarị nke a, anaghị m ere ya. Anyị emechiela ọtụtụ nnukwu azụmaahịa na ntanetị yana nzukọ ihu na ihu adịghị mkpa webinars na webmeetings. ReadyTalk bụ onye ahịa. O yikarịrị ka ọ dị mfe imechi ihu na ihu ka ị wee nwee ike iwulite ntụkwasị obi karịa, mana ọ dịghị mkpa na afọ necessaryntanetị.
Kpakorita ma Soro - Enwere ike inwe uzo efu tupu nke a, nke ahụ bụ ịmata isi ihe mgbu nke onye ahịa ma chọpụta mmefu ego ka ị nwee ike ịhazi atụmatụ. Anyị na-adịghị kpakorita nke ukwuu… anyị chepụta ihe anyị ahịa mkpa na-ekpebi ma anyị nwere ike mezuo ya na ha mmefu ego ụlọ. Mgbe ahụ, anyị tụkwasịrị anya na anyị ga-enwe ihe ịga nke ọma.
N'ụzọ dị mwute, ihe ọmụma ahụ na-egosi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị ahịa niile anaghị agbaso nwere ndu. Nke ahụ bụ ọgwụ siri ike ilo maka ndị na-ere ahịa ka ha na-arụsi ọrụ ike ịkwọ ụgbọala!
Tags: mechie ndumechie ire eremechie ahịaCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaotúesi emechi uzo ahiaụzọedu ọgbọatụmanya